मान्छे संग सद्भाव! ４ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जुन जापानी आसपासका मानिसहरुसंग सद्भावको कदर गर्दछ - Best of Japan
जापानीहरु वरपरका मानिसहरुसंग सद्भावको कदर गर्दछन्। यदि तपाईं जापान आउनुभयो भने, तपाईंले यो शहर भर महसुस गर्नुहुनेछ। उदाहरण को लागी, निम्न चलचित्रले देखाउँदछ, जापानी मानिसहरु चौराहे पार गर्दा, होसियारीसाथ एक अर्का लाई पार। मलाई लाग्छ कि यी जापानी विशेषताहरु मा चार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ। यस पृष्ठमा, म यस बिन्दुको बारेमा व्याख्या गर्नेछु।
केटाकेटीहरू साँच्चिकै प्यारो हुन्छन् जुनसुकै देशमा हामी यात्रा गर्छौं। जापानी बच्चाहरु पनि प्यारा छन्। मलाई आशा छ कि बच्चाहरू द्वन्द्व र पूर्वाग्रहविना खुशीसाथ बाँच्नेछन्। मैले गर्न सक्ने कुरा भनेको तपाईंलाई सूचित गरिरहनु हो जुन हामी कसैसँग झगडा गर्न चाहँदैनौं र हामी हाम्रा पाहुनाहरू विदेशबाट चाहन्छौं ...
जापानीहरु प्रकृति साथ साथै प्रकृति संग सद्भाव
जापानीहरू एउटै गाउँका मानिसहरूसँग मिलेर बस्छन्
जापानीहरूले कहिल्यै ठूलो आक्रमण प्राप्त गरेनन र विरोधाभासको अनुभव थोरै भयो
जापानी भाषालाई आधुनिक शिक्षाको वरिपरिको वातावरणसँग मिलेर बस्न सिकाइएको छ
जापानीहरूले ग्रेट इस्ट जापान भूकम्पको अनुभव गरे र फेरि सद्भावको महत्त्व महसुस गरे
मानिसहरूलाई जापानी आतिथ्यको बारेमा बढी जान्न चाहने मानिसहरूलाई
के तपाईंलाई शिब्या, टोकियोमा हाचिकोको छेडछाड थाहा छ? जापान आएका धेरै विदेशी पर्यटकहरु यो चौराहे देख्न आउँछन्। सबै भन्दा पहिले, कृपया तलको भिडियो हेर्नुहोस्।
जहाँसम्म एक चौबाटोमा धेरै मानिसहरू पार गर्दछन्, जापानीहरूले एक अर्कामा सम्झौता गर्न सक्छन् र उनीहरूलाई प्रहार नगरी अगाडि बढ्न सक्छन्। सामान्यतया, जापानीहरू नर्भको साथ धेरै हिड्दैनन्। यी ब्यवहारहरू धेरै अघिदेखि विरासतमा आएको छ, र जापानीहरू सचेत नहुँदा यो गर्दछन्।
जापानी व्यक्तिहरुका लागि वरपरका मानिसहरुसंग मिलेर बस्नु अत्यन्त स्वाभाविक हो। जापानी मानिसहरु लाई साधारण ठाँउ मा वरपरका मानिसहरु लाई बेवास्ता गर्न को लागी सामान्य छ। त्यसकारण, जापानीहरूले बुझ्न सकेनन् किन किन विदेशी देशका मानिसहरु चौराहे मा जापानी व्यवहार मा चासो राख्छन्।
सम्भवतः जापानी व्यक्तिहरूको यस प्रकृति पछाडि धेरै कारणहरू छन्। विशेष रूपमा, म निम्न चार ऐतिहासिक पृष्ठभूमिहरूमा ध्यान दिइरहेको छु।
पहिलो, जापान ऐतिहासिक रूपमा धानको खेतीमा केन्द्रित कृषि समाज थियो। चामल बनाउनको लागि गाउँ भित्रका व्यक्तिहरूसँग सहयोग आवश्यक थियो। उदाहरणको लागि, श्री एको चामलको खेतमा धान रोप्दा, गाउँका मानिसहरू आएर उनीहरूलाई सँगै रोप्यो। यसको सट्टा, श्री ए पनि सहयोग गर्न गए जब अर्कोले धान लगाए। त्यस्तो सहयोगी सम्बन्ध कायम गर्न, मानिसहरूसँगको सद्भाव महत्त्वपूर्ण थियो। निम्न भिडियोले देखाउँदछ कि अन्य मानिसहरू एक चामलको खेतमा धान रोप्दा भेला भएका थिए र सहयोग गरे। गाउँमा, जब हामी पहिलो धान रोपाई गर्छौं, हामीले राम्रो फसलको लागि परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेका थियौं र हामीले त्यस्तै घटना गरेका थियौं। यो भिडियो Gifu प्रान्तको Shirakawago मा आयोजित कार्यक्रमको लिइएको थियो।
चामल रोप्नका साथै, जापानीहरू विभिन्न चरणमा एक अर्कालाई सहयोग गर्दै थिए। निम्नको शिराकावा-गो घरको छानाको छानाको पुनर्निर्माणको समयमा चलचित्र चलचित्र हो। एउटा घरको लागि, वास्तवमा धेरै व्यक्तिहरूले गरे।
विगतमा, गाउँहरूमा मात्र होइन शहरहरूमा पनि एक अर्कालाई सहयोग पुर्‍याउने सम्बन्ध थियो। समकालीन जापानी मानिसहरुमा त्यस्ता सहयोगी सम्बन्धहरु हराइसकेका छन, तर सौहार्दको ख्याल राख्दै आत्मा अहिले पनि हामीलाई सुम्पिएको छ।
दोस्रो, त्यहाँ एक ऐतिहासिक तथ्य छ कि जापान एक टापु देश हो र बाहिर बाट आक्रमणको कुनै अनुभव छैन। जापानले आधुनिक युग भन्दा पहिले शान्तिको आनन्द उठाएको छ। यस कारणका लागि, हामीसँग अन्य व्यक्तिहरूसँग विरोधाभास गर्ने धेरै विचार छैन।
किनकि हामी एकै भूमिमा र एकै जातीय समूहमा धेरै समय बाँचिरहेका छौं, अर्को व्यक्तिको साथ पाउनु पर्ने ज्ञानले अर्कोलाई हराउनको लागि नभई विकसित हुन सक्छ।
मलाई लाग्छ कि जापानी मानिसहरुको वरपरका मानिसहरुसंग मिलाप गर्नु राम्रो चीज हो। जे होस्, हामी दृढतासाथ आफैंको राय भन्न खोज्दैनौं किनकि हामी सद्भावको महत्त्व राख्छौं। यस सन्दर्भमा, मलाई लाग्छ कि जापानीले अन्य देशका मानिसहरुमा सञ्चार कौशल सिक्नु पर्छ।
परम्परागत जापानी घरहरू बाहिर शटरस्टक बाहिर खुला छन्
कुनै पनि विदेशी शत्रुले आक्रमण गरेन भन्ने तथ्यले परम्परागत जापानी घरहरूको संरचनालाई प्रभावित गरेको छैन। जापानी घर बाहिर फराकिलो छ। यो मुख्यतया गर्मीमा नमी रोक्नको उद्देश्य हो। यद्यपि यो सम्भव थियो किनकि त्यहाँ विदेशी शत्रुले आक्रमण गर्ने डर थोरै थियो।
जापानमा पनि १ there औं शताब्दीको अन्तदेखि १ 15 औं शताब्दीको अन्तसम्म युद्धरत देशको युगमा विदेशी शत्रुले आक्रमण गर्ने खतरा थियो। यस अवधिमा, निजी घर को निर्माण एकदम फरक थियो। जब एक विदेशी शत्रु आयो, घरमा आक्रमणलाई रोक्नको लागि, विन्डोसँग केवल न्यूनतम आवश्यक थियो।
यसको तर्फबाट १ Japan औं शताब्दीमा जापानमा मंगोलियन सेनाले आक्रमण गरेको छ। यद्यपि यस समयमा समुराईले मंगोलियाली सेनाको बिरूद्ध लडाई लड्यो। यस कारणले, जापानको शान्ति कायम गरियो।
र तेस्रो। मलाई लाग्छ कि जापानी भाषामा अन्य व्यक्तिहरूसँगको मेलमिलापको मूल्य बढाउने झुकावलाई आधुनिक युगदेखि नै स्कूल शिक्षाले मजबुत बनायो।
अहिले पनि जापानमा, बच्चाहरूलाई इलिमेन्टरी स्कूल, जूनियर हाईस्कूल, उच्च माध्यमिक विद्यालय र यस्तै अन्य सामूहिक ब्यबहारको महत्त्व सिकाईन्छ।
उदाहरण को लागी, कुनै पनि प्राथमिक स्कूल वा जूनियर हाई स्कूल मा, एक खेल महोत्सव माथिको भिडियो मा हेर्न को लागी वर्ष मा एक पटक आयोजना गरीन्छ। त्यहाँ बच्चाहरू टोलीहरू मिलाउँछन् र एक अर्कालाई मद्दत गर्न कडा परिश्रम गर्दछन्। रिले दौडमा, केटाकेटीहरू धेरै पटक डन्डी डेलिभरी अभ्यास गर्छन् र टोली खेल परिष्कृत गर्छन्। मलाई लाग्छ कि यी अनुभवहरूले जापानी संगठनात्मक व्यवहारलाई बढावा दिन्छन्।
अन्तमा, मलाई लाग्छ कि जापानीहरूले मार्च ११, २०११ मा भएको ग्रेट इस्ट जापान भूकम्पको समयमा एक अर्कालाई सहयोग गर्नुको महत्त्व सम्झना गरे।
ठूलो भूकम्पको समयमा, तोहोकु क्षेत्रमा मात्र नभई टोकियो जस्ता अन्य क्षेत्रमा पनि तीव्र भूकम्पहरू थिए। त्यस समयमा मैले टोकियोमा पनि भूकम्पको अनुभव गरें। मैले एउटा अखबारको कम्पनीमा काम गरें। र अग्लो फ्लोरको कार्यालयबाट मैले शहरलाई हेरेँ। धेरै धेरै मानिसहरू घर हिड्दै थिए। त्यो रात घर फर्कने क्रममा मानिसहरूले एक अर्कालाई सहयोग गरे।
त्यस पछि जब टोहोकु क्षेत्रमा भएको विनाशको खबर आयो धेरै जापानीहरूले आफूलाई के गर्न सक्छन् भनेर सोधे। केही व्यक्तिहरूले तोहोकु क्षेत्रमा राहत सामग्री पठाए तर कोही टोहोकु क्षेत्रमा स्वयंसेवी गतिविधिमा संलग्न भए। त्यो ठूलो भूकम्प पछि, जापानीहरूले एक अर्कासँग "KIZUNA" र "TUNAGARU" जस्ता शब्दहरू बोले। "KIZUNA" र "कनेक्ट" भनेको एकता हो। मलाई लाग्छ कि अनुभवले जापानीको भावनाहरुलाई अझ सुदृढ बनायो जसले सद्भावको मोल गर्दछ।
ठुलो भूकम्प पछि, हामीले विदेशबाट धेरै उत्साहजनक शब्दहरू पायौं। हामी तपाईलाई धन्यबाद दिन्छौं। हामी महसुस गर्छौं कि हामी एक अर्कालाई सहयोग गर्न चाहन्छौं।
म अर्को लेखमा केहि बढी विस्तृत जम्मा गरियो। यदि तपाइँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने, कृपया तलका स्लाइड छविहरूमा क्लिक गर्नुहोस्।
यस पृष्ठमा, म जापानी आतिथ्यको भावनाको बारेमा व्याख्या गर्नेछु। जापानमा, अतिथि सत्कारलाई "ओमोटिनेशी" भनिन्छ। यसको आत्मा चिया समारोहबाट आएको भनिएको छ। जे होस्, म तपाईंलाई यहाँ एउटा अमूर्त कथा भन्न गइरहेको छैन। म केहि YouTube भिडियोहरू मार्फत जापानी आतिथ्यका उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ कि यदि तपाइँ जापान आउनुभयो भने तपाईले यसलाई हेर्नुहुनेछ र सुन्नुहुनेछ। सामग्रीको तालिका जापानी आतिथ्यका उदाहरणहरू किन जापानी व्यक्तिहरूले आतिथ्यको भावनामा सेवा गर्छन्? जापानी आतिथ्य को उदाहरण सबै भन्दा पहिले, कृपया निम्न भिडियोहरू हेर्नुहोस्। यी भिडियोहरूको साथ, तपाईं विभिन्न परिस्थितिहरूमा जापानी अतिथि सत्कारको उदाहरण देख्न सक्नुहुन्छ। जापानका धेरै मानिसहरू आतिथ्यको हृदयले काम गर्छन् एक रेस्टुरेन्टमा जापानमा, धेरै कर्मचारीहरू रेस्टुरेन्ट र होटेलमा हाँसोका साथ अतिथि सत्कार गर्छन्। ग्राहक सेवा म्यानुअल अनुसार काम गर्दा पनि, तिनीहरूले थोरै आफ्नो ग्राहकहरुलाई सन्तुष्ट गर्न को लागी कोशिश गर्नेछन्। अवश्य पनि, केहि कर्मचारीहरूको कुनै प्रेरणा हुँदैन। यद्यपि जापानमा मलाई लाग्छ कि त्यहाँ धेरै मानिसहरु मुस्कुराएर सेवा गर्न खोजिरहेका छन् जतिसुकै गाह्रो भए पनि। यो प्रवृत्ति रेस्टुरेन्ट र होटेलमा सीमित छैन। अर्को, ग्यास स्टेशनको भिडियो हेरौं। जापानमा एक ग्यास स्टेशनमा, धेरै उद्योगहरूमा धेरै व्यक्तिहरू छन् जुन अतिथि सत्कारको अनुभव गर्छन् जुन उनीहरू ग्राहकहरूको सेवा गर्न चाहन्छन्। जापानमा पनि, सेल्फ सर्विस प्रकार ग्यास स्टेशनहरू हालै वृद्धि भइरहेको छ। त्यस्ता प्रकारका ग्यास स्टेशनहरूसँग, तपाईं सक्षम हुनुहुनेछैन ...
जापान आउने धेरै विदेशी पर्यटक जापानी आचरण र चलन बुझ्ने कोशिस गर्छन्। जापानी दृष्टिकोणबाट, म धेरै खुसी छु कि तपाईले हामीलाई त्यस्तो बुझ्नु हुनेछ। जहाँसम्म, यदि तपाईं घबराउनुहुन्छ कि तपाईं हाम्रा नियमहरू पालना गर्नुहुन्छ, त्यो चिन्ता अनावश्यक छ। हामी आशा गर्दछौं कि तपाई आराम गर्नुहोस् र जापानको आनन्द लिनुहोस्। कृपया यसको बारेमा सोच्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्। यस पृष्ठमा, म जापानी आचरण र सीमा शुल्क प्रस्तुत गर्नेछु। मँ चाहन्छु कि तपाईंले जापानी शिष्टाचार र चलनहरू कडासँग सिक्नुहोस्। मलाई आशा छ कि तपाई जापानको बानी-बेहोरा र प्रचलनहरूमा चासो राख्नुहुनेछ र जापान आउने आशा गर्नुहुनेछ। सामग्रीको तालिका यदि सम्भव छ भने कृपया जापानी शिष्टाचार र सीमा शुल्कहरूको मजा लिनुहोस् सिफारिस गरिएका सम्बन्धित भिडियोहरू यदि सम्भव छ भने कृपया जापानी शिष्टाचार र चलनहरूको मजा लिनुहोस् मलाई जापानी जनताको मुख्य बेहोरा र चलनहरूको बारेमा म तपाईंलाई ठोस तरीकाले देखाउँछु। जापानी झुकाव जब तपाईं जापान पुग्नुहुन्छ, तपाईंले पहिले याद गर्नुहुनेछ कि जापानी बार बार। बोइ deeply्ग जापानी जनताको जीवनमा गहिरो जरा छ। हामी नजिकका साथीहरुलाई पनि अug्गालोको लागि प्रयोग गरिएको छैन। मलाई लाग्छ कि जापानमा बसिरहेको बेला तपाईंले जापानी अ h्गालेको दृष्टि देख्नुहुन्न। जापानीहरु चिसो मान्छे छैनन्। जापानी मानिसहरु झुकाएर अरूलाई आफ्नो चिनारी र सम्मान व्यक्त गरे। निम्न चलचित्रले तपाईंलाई जापानी बोडि aboutको बारेमा धेरै राम्ररी बताउनेछ। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, यो जापानी बोइ habit बानीले जापानमा बस्ने पशुहरूमा प्रभाव पार्दछ। नर शहर मा नारा पार्क मा बस्ने हिरण पक्कै धनु पर्छ यदि तपाईं झुक्नुहुन्छ! जापान मा सफा लाईन लाइन, हामी ...
जापानी खेल को आयोजन मा राम्रो छ। जापानीहरूले समूहमा एक अर्कालाई मद्दत गर्छन् र उच्च परिणामहरू उत्पादन गर्छन्। मलाई लाग्छ कि यी विशेषताहरूको अंश देख्न सकिन्छ तपाईं जापानमा रहँदा। उदाहरण को लागी, बिहानको भ्रमण समय मा जापानी व्यापारिक मानिसहरु एक ठूलो स्टेशन मा व्यवस्थित मा सार्न। शिंकान्सेनको घरमा ट्रेन भित्र सफा गर्ने जिम्मेवार महिलाले प्रत्येक गाडीलाई राम्ररी सफा गर्नेछन्। यस्तो टोली खेल देख्न चाखलाग्दो हुन सक्छ। सामग्री तालिका प्रदर्शन प्रदर्शन जापानीले संगठनात्मक खेलमा देखायो जापानीज सामूहिक व्यवहार तपाईले शहरमा देख्न सक्नुहुनेछ एउटा प्रदर्शन जुन जापानीले संगठनात्मक खेलमा देखायो सबैभन्दा पहिले, कृपया तलको भिडियो हेर्नुहोस्। युवा जापानी पुरुषहरूले विशेष गरी भिडियोको दोस्रो भागमा उत्कृष्ट संगठन खेल देखाउँछन्। एलिमेन्टरी स्कूलको समयदेखि, जापानीहरूले विभिन्न संस्था खेल सिके, उदाहरणका लागि एथलेटिक फेस्टिवलमा। त्यसोभए, यदि जापानीले कडा अभ्यास गरे, उनीहरूले माथि पनि प्रदर्शन गर्न सक्छन्। जापानी व्यक्तिहरू व्यवसायमा पनि यस प्रकारको संगठनात्मक खेलको महत्त्व राख्छन्। जापान आउने पर्यटकहरूलाई जापानी जनताको अवस्थालाई काममा हेर्ने मौका नहुन सक्छ। यद्यपि, मलाई लाग्छ कि यात्राको क्रममा विभिन्न दृश्यहरूमा जापानी संगठनात्मक खेलको अंशको झलक पाउन सम्भव छ। जापानी सामूहिक ब्यबहार तपाईले शहरमा देख्न सक्नुहुन्छ उदाहरणका लागि, यदि तपाई बिहान एक हडबडमा ठूलो स्टेशन जानुभयो भने तपाईले जापानी व्यापारीहरुलाई अर्को फिल्म जस्तै अर्डर हिड्दै गरेको देख्न सक्नुहुन्छ। जापानी मानिसहरु काम गर्न को कम्युट को रूप मा, तिनीहरू चुपचाप हिंड्न को रूप मा छैन ...
यस पृष्ठमा, म जापानमा पारिवारिक सम्बन्धको बारेमा व्याख्या गर्न चाहन्छु। अरू धेरै एशियालीहरू जस्तै हामी पनि आफ्नो परिवारको धेरै हेरचाह गर्छौं। यद्यपि, जापानको पारिवारिक सम्बन्ध पछिल्लो आधा शताब्दीमा उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन भयो। धेरै मानिस शहरमा बस्नको लागि गृहनगर छोडे र त्यससँगै, पारिवारिक सम्बन्ध पनि पातलो भयो। विगतमा, जापानीहरूले करीव दुई बच्चाको परिवारलाई आदर्श बनाए, तर हालै त्यहाँ अझ धेरै जोडीहरू छन् जसको बच्चा छैन। थप रूपमा, विवाह नगर्ने त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन्। यस प्रकार घट्दो जन्म दर द्रुत गतिमा प्रगति गर्दैछ। मलाई लाग्छ कि तपाईं आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ कि जापानमा आउने जब शहरमा हिडेको जापानी बुढो भैरहेछ। किनकि युवाहरू कम भएको छ, वृद्धहरू तुलनात्मक रूपमा बढ्दै छन्। मलाई लाग्छ कि जापानको वर्तमान अवस्था धेरै देशहरूमा पनि देखा पर्नेछ। सामग्री १ 1970 2020० को तालिका: युवा जापानी मानिसहरूले केवल दुई र दुई बच्चाहरूका साथ घरहरू बनाएका थिए २०२०: जापानी व्यक्तिहरूले नयाँ पारिवारिक सम्बन्धहरू अन्वेषण गर्न थाले १ 1970's० को: युवा जापानी मानिसहरूले केवल दुई जोडी र दुई बच्चाको साथ घर बनाउँदछन् महिलाहरू काम गर्दैनन्, बच्चा पालनपोषणमा ध्यान केन्द्रित गर्छन् सर्वप्रथम, कृपया माथिको भिडियो हेर्नुहोस्। यो भिडियो १ 1970 s० को दशकमा जापानको परिवार हो। यस युगमा, पतिहरूले कडा परिश्रम गर्नु स्वाभाविकै थियो र पत्नीहरूले घरको काम र बच्चाको पालनपोषणमा ध्यान केन्द्रित गर्नु सामान्य थियो। त्यस समयमा युवा जापानीहरूका लागि दुई परिवार सहितको सानो परिवार आदर्श परिवार थिए। त्यो भन्दा पहिले, यो हजुरबा हजुरआमा बाँचिरहेको स्वाभाविक थियो ...